Apple wuxuu ku shaqeeyaa dareemayaal si loo cabbiro gulukooska dhiigga iyada oo loo marayo Apple Watch Series 8 | IPhone news
Apple waxay ku shaqeysaa dareemayaasha si ay u cabbiraan gulukooska dhiigga iyada oo loo marayo Apple Watch Series 8
Dhawr qarni ayaannu ka digaynnay oo aan ku dhex aragnay wararka xanta ah imaanshaha suurtogalka ah ee a hab aan fiicneyn oo lagu cabbiro heerka gulukoosta dhiigga. Runtu waxay tahay haddii aan si qabow uga fikirno waxa imaanshaha dareeraha noocaas ah ee Apple Watch oo leh qiime "macquul ah" macnaheedu noqon karo, waxaan nahay iibiyaha dhabta ah ee adduunka oo dhan.
Tan iyo markii la sii daayay iOS 15, isticmaalayaasha Apple way awoodaan ku dar xogtan heerka sonkorta ee ku jirta barnaamijka caafimaadka qalab dibadeed. Si aad u yara fekerto haddii saacadda Apple ay awooddo inay si otomaatig ah u cabbirto cabbirkan oo u keydiso xogta iPhone -ka ayaa hubaal noqon doonta wax runtii xiiso leh.
Waxaan cadaynnaa in noocyadan dareemeyaasha ah ee aan u baahnayn jeexitaan iyo muunad dhiig oo dambe ayaa jira maanta, laakiin qiimayaashu badanaa waa mamnuuc. Apple waxay leedahay kheyraad iyo lacag ku filan oo ay ku shaqeyso dareemayaasha noocan oo kale ah oo ay ku hagaajiso qiimaheeda intii suurtogal ah si dhammaan kuwa qaba cudurka macaanka ay si aad ah u xakameeyaan xaddiga sonkorta ku jirta dhiigooda.
Waqtiga sii socda ee Apple Watch wuxuu helayaa dhibco ku saabsan arrimaha xakamaynta caafimaadka, waxaan u maleyn karnaa in mar uun shidmahan uu imaan doono ... MacRumors Waxay ku celceliyaan warbixin ka timid Digitimes, taas oo alaab-qeybiyeyaasha Apple loo malaynayo inay horumarinayaan qalab u oggolaanaya Apple Watch Series 8 inuu cabbiro cabbirkan. Waxaa jira hadal dareemayaasha infrared wavelength gaaban, nooc dareeme ah oo loo isticmaalo aaladaha caafimaadka ee keeni kara hawshan caafimaad ee cusub.
Waxay dhawr sano ka sheekaynayeen nooca dareenka ee saacadda Apple, Ma u malaynaysaa in jiilka xiga ee Apple Watch ay awoodi doonaan inay cabbiraan gulukooska dhiigga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple waxay ku shaqeysaa dareemayaasha si ay u cabbiraan gulukooska dhiigga iyada oo loo marayo Apple Watch Series 8
Cusbooneysiinta! IOS 15.1, iPadOS 15.1 iyo macOS Monterey ayaa halkan jooga
Kuwani ma noqon doonaan jiilka labaad ee AirPods Pro?